तिथि मेरो पत्रु » तपाईं आफ्नो केटा परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन किन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Dec. 02 2020 |2मिनेट पढ्न
यति तपाईं आफ्नो मानिस परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ कसरी बारे लेखिएको छ. तपाईं उहाँलाई वश र तपाईं उसलाई हुन चाहनुहुन्छ मानिस उसलाई गर्न सक्छौं. तर यो यहाँ इमानदार हुन गरौं, के सधैं वर्तमान मा वार्ता लिखित र यस्तो कामको दीर्घकालीन परिणाम भन्दा चमक देखिन्छ छ. सत्य उहाँले तपाईंको लागि सही छैन किनकी तपाईं मात्र एक मानिस परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ छ.
तपाईं प्रेम वा साँच्चै एक मान्छे जस्तै तिमी तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् जब. तिनीहरूले उहाँलाई बनाउने तत्व उहाँ ठीक हुन् किनभने तपाईं उहाँबारे घृणा समेत कुराहरू तपाईं उहाँबारे भनेपछि हुरुक्कै. तपाईं तिनीहरूलाई परिवर्तन भने तिनीहरू अन्त दीर्घकालीन मा यसको वाहेक तपाईं दिएकोमा रिसाउनुको. अनि तपाईं उनलाई दोष गर्न सक्छन्? के तपाईं लडकों र lasses परिवर्तन कसैले चाहनुहुन्छ? गहिरो हामी आधा भावनाका प्रेम चाहँदैनन् हो जो कुनै कुरा तल. कि प्रेम बस हाम्रो लागि सही छैन जो एक मान्छे को लागि सुल्झाउन छ. अनि अचम्मको यस तरिका जो मान्छे (पक्कै त्रुटिपूर्ण तर हरेक सम्बन्ध यो गरेको क्षण छ) तपाईं स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ जहाँ प्रेम, खुसी, उहाँले तपाईंलाई बहादुर हो लागि तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान सुरक्षित. तिनीहरूले त्यो होइन कसैलाई मा पूरा पहिलो मान्छे परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्छन्. तिनीहरूले प्रतीक्षा र तिनीहरूले परिवर्तन गर्न आवश्यकता बिना आफ्नो संसारमा परिवर्तन गर्ने कि व्यक्ति पाउन.
प्रेम आदर बारेमा छ. तपाईं बाहिर प्राप्त गर्ने आशा के मा राख्नुपर्छ. तपाईं उहाँलाई बारी मा त तपाईं परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् भने तपाईं आदर गर्नुपर्छ त्यसैले उहाँलाई परिवर्तन गर्न. यसबाहेक तपाईं उहाँलाई साँच्चै आफ्नो मन पार गर्दैन उसलाई कुनै भाग परिवर्तन को विचार प्रेम भने. म तपाईं / सारा taming प्रयोग दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर जीवन-लामो साथी पाउनुहुनेछ भन्ने होइन छु तर तपाईं यसरी साँचो प्रेम पाउनुहुनेछ. त्यसैले निर्णय तपाईं संग छ. तपाईं कुनै वा एक चाहनुहुन्छ?
6 कारण आफ्नो सेल फोन तल रखो